Adobe wuxuu soo bandhigayaa Go'aan sare oo loogu talagalay Kaamirada RAW | Abuurista khadka tooska ah
Maxaa ku cusub Adobe ee Photoshop-ka ku jira iPad-ka iyo Go'aanka Super ee loogu talagalay Kaamirada Caydhiin iyo Lightroom
Manuel Ramirez | | Qalabka Naqshadeynta, Photoshop, dhowr
Adobe ayaa dib ugu soo laabatay warka Photoshop ee ku saabsan ipadka, kaliya labo ka mid ah, iyo waa maxay qaraar aad u sarreeya oo loogu talagalay Kaamarada Caydhin iyo Lightroom. Midda dambe waa inaan xoogaa sugno, maadaama xilligan la joogo kaliya loo heli karo Kaamirada Raw.
In kasta oo Adobe ay ku dhawaaqday in aysan noqon doonin waqti dheer oo aan u adeegsan karno xallintaas ugu sareysa u beddelo sawir 10MP ah 40MP mid hal guji ah iyo natiijooyin tayo leh.
Kadib markaan ogaadey Warka Adobe ee fiidiyowga bisha Maarso, Photoshop-ka iPad-ka waxaa ku jira muuqaalkii ugu horreeyay ee lagu xisaabtamo: Taariikhda nooca dukumiintiyada ku jira daruuraha iyo taas waxay noo ogolaaneysaa inaan dib ugu laabanno habka ugu Ctrl + Z, oo sidaas waan awoodaa caleenta ilaa 60 maalmood oo taariikhi ah. Hawl la taaban karo oo wax soo saar wanaagsan leh oo dad badani ogaan doonaan sida looga faa'iidaysto si buuxda.
Xaqiiqdii noocyada waa la calaamadeyn karaa si aysan u dhicin, waa la beddelay oo si joogto ah ayaa loo keydiyay. Xusuusta labaad ee Photoshop-ka ku jirta iPad-ka ayaa sidoo kale daruuraha la xiriirta waxayna u jeeddaa suurtagalnimada in deegaanka laga badbaadiyo faylasha aan ku leenahay daruurta; Sida DropBox ahaan, tusaale ahaan, waxay noo oggolaaneysaa inaan yeelanno gal aan halkaas ka furanno.
Waxa runti taasi u oggol tahay waa taas waan heli karnaa feylashaas markii aanan xiriir lahayn mise waanu jarnay. Xaqiiqdii Adobe ayaa kujirta inaadan rabin ama aad ku kaydinaynin meelaha laga helo iPad-ka.
Malaha kan ugu qaylada badan ayaa ah Xirfadda Super Resolution ee Adobe Camera Raw plugin ee ku jirta Photoshop, kaas oo si sax ah u sameeya wixii kor lagu soo sheegay. Qaraarka Super wuxuu adeegsadaa a qaabka barashada mashiinka horumarsan oo lagu tababaray malaayiin sawir ah. Si kale haddii loo dhigo, waxay si caqli-gal ah u weyneyneysaa sawirrada iyadoo la ilaalinayo faahfaahinta muhiimka ah lana ilaalinayo nadiifinta geesaha.
Adobe wuxuu cadeeyay in Super Resolution-kan sidoo kale imaan doono Adobe Lightroom iyo Lightroom Classic.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Maxaa ku cusub Adobe ee Photoshop-ka ku jira iPad-ka iyo Go'aanka Super ee loogu talagalay Kaamirada Caydhiin iyo Lightroom
Sida sawir loogu gooyo khadka tooska ah